URobert Clark, umfoti ogqwesileyo onomdla kwiintaka | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ezi foto ziphonononga iinkcukacha zeentsiba zeentaka ezivela kwihlabathi liphela
Sikhangela amaxesha amaninzi kwiteyile yezo iinkcukacha kunye nezinto ezithile oko kusikhokelela kwimpembelelo okanye ukudibana nento ehlasela imvakalelo kwaye isenze siphuphe okwethutyana. Obo bubuhle obukhulu bobugcisa xa buchukumisa into engenakuchazwa ngamagama.
Loo mfihlakalo siyifunayo ngamehlo kunye neemvakalelo zethu ifumaneka kwiindidi ezininzi zobomi esinazo ezisingqongileyo, ezinje ngeentsiba ezithi, xa zidlula kwiilensi zekhamera, zisishiye singathethi ngamawaka eenkcukacha zabo ezincinci ekubunjweni, imilo kunye nombala.
Oku kuyenzeka ngokufota kukaRobert Clark osibuyisela kwilizwe apho i inani elikhulu leentaka gcwalisa inqwaba yamaphepha enza incwadi yakhe Iintsiba: Imiboniso yeePhuphu eziqaqambileyo.
Omnye uvavanyo olunomdla olubonakalayo lobuninzi bemibala neemilo iintsiba zentaka elula ezinokuba nazo. Kule ncwadi ukubanjwa okuqhubekayo kweentlobo ngeentlobo zeentaka kunye neentsiba zazo zidityaniswe nenkcazo yokusebenza kwazo kunye nokuziphendukela kwemvelo ukutyhubela iinkulungwane. Ukusuka kwiintsiba eziluhlaza ezihombise intloko yegolide yeQuetzal eMzantsi Melika ukuya kwezo zeqhude lobomi.
Umdla kaClark kwezi zilwanyana kungenxa yexesha lobuntwana bakhe apho wachitha iiyure ebukele iintaka ezifudukayo kwilizwe lakhe laseKansas. Umtsalane wakhula kwaye waqala ukuphanda umbono kaDarwin wokuzivelela kwezinto ukuba afunde indlela iintaka eziyinxalenye ebaluleke ngayo kuphuhliso lweembono ezibalulekileyo.
Ngaphezulu kwe Iminyaka eli-15 esebenzela iNational Geographic, kukhokelele kwizambatho ezininzi kunye namabhaso amaninzi kubugcisa bakhe bokufota.
Unayo I-instagram yakhe y iwebhusayithi yakho ukulandela eyakho umsebenzi omangalisayo wefoto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Ezi foto ziphonononga iinkcukacha zeentsiba zeentaka ezivela kwihlabathi liphela
Imizobo encinci ephefumlelweyo ka-Claudia Maccecchini